Halkan ka Baro Kelmadaha Dumarka Soomaaliyeed ay ku Beerla-xawsadaan ama kusoo Jiitaan Wiilasha Soomaaliyeed
Subject: Halkan ka Baro Kelmadaha Dumarka Soomaaliyeed ay ku Beerla-xawsadaan ama kusoo Jiitaan Wiilasha Soomaaliyeed Mon Aug 30, 2010 9:38 pm
Kadib markii mudo aan fogayn daraasad aan ku sameeyay kalmadaha Raggu marka ay doonayaan gabadha inay kaga hadliyaan ama xilliga is barashada ee ay doonayaan inay inanta halkaa uga dhawaadaan. (100 Kalmadood oo dumarku ku Beer-laxawsadaan ragga).
1. Kalmadahani(100-kan Dumarka iyo 100-kii Ragguba) maaha kuwa kaliya ee Ragga ama Dumarku midba dhinacooda isticmaalo laakiin waa kuwii ugu badnaa, ama Ragga badankooda iyo Dumarkuba isticmaalaan.
2. Beer-laxawsiga iyo kalmadahanba qofba si buu u isticmaalaa, qofbaa si daacad ah uga xog waramaya qalbigiisa oo kalmadahan adeegsan kara. Qofbaa si ilaaqi ku jirto ama dhallinyarnimo u isticmaalaya, iyo qaar kale oo badan. Markaa yaan loo malayn in dadka isticmaala oo dhami aanay ka run sheegayn.
waa kuwan kelmadaha:
1. walal magac macaan baad leedahay
2. aniga magacaygu waa Fihiima, Hinda, Layla, Siraad
3. wiil isku dhacaaya ayaad tahay
4. magacaaga waad u qalantaa
5. walaal ma xaas baad tahay?
6. kolay ta ku calfataa waa mid nasiib leh.
7. ninkii wanaagsanaa, gabadh baa haysata.
8. kolay hooyadaa baa kuu ducaysay
9. aftahanimada ma aabahaa baa kugu dhallay?
10. hanad hooyo dhashay baad tahay.
11. geesi baad iila muuqataa
12. aqoon yahan baad iila eg tahay
13. nin faraha lagaga gubtay baad u muuqataa
14. ragga adigoo kale ah lamaba helo
15. hawl kar baad tahay
16. meel lagugu diidaba ma lihid
17. habeen dhalad baad tahay
18. Deeqsi baad tahay
19. walal wiil kuu eeg walaalo ma tihiin?
20. wax wax loo dhalaad tahay
21. janaalaad tahay
22. gob baad tahay
23. jiniyadahaagaa I qanciyay
24. waad Jamaal badan tahay
25. walal waan kaa helay
26. indhahayga ayaan kaa jeclahay
27. imikaaban ku hadal hayey gacaliye
28. xageed ka dhacday?
29. lama arag baad noqotay
30. oo yaa ku arkaba
31. oo inaabti maxaad iila soo hadli weydey?
32. haday inani ku jamato sedan loolama dhaqmo dee
33. waan kuu xiisay
34. ma qof la ilaawaad tahay
35. been hay sheegin
36. daacada sidaan kuugu ahay, iigu ahow.
37. kaama maarmi karo
38. imika intaadan ila soo hadal ka hor uun baan ku hadal hayey.
39. indhahayga ayaan kaa jeclahay
40. dee waabay iga kaa haysataeye
41. tollow miyaad I fashay!
42. alla anigaaba iska ba’ay, (waar ma geed baad I saartay)
43. illeen waxani jacayl ka wayne
44. sawnigan saacad kastaba tabaya!
45. car anigoo kale isoo hel
46. cawo iyo nasiibkaa hadaad I hesho
47. ma miskiinadaydan ku jecel baad aragtay?
48. horta maxaad isla macaanaysaa?
49. horta marna ma iga fikirtaa?
50. isku halayn baad waxaa iigu samaynaysaa
51. baryahanba anigoo kuu cadhaysan baan hadan ku raadinayay
52. wax laygu kaa daayiyay garan maayee
53. dareenkaygu kaama taggana
54. hayaankaagu wacanaa
55. hoodaadu ma xumee, hadalka I deeqsii
56. horta hooyadaa miyay nooshay?
57. hablo miyay kula dhasheen?
58. inamadiina ma adigaa u way?
59. baryahan miyaanad waxba cunin waad xumaatee?
60. horta ma ogtahay inaan magacaaga ku hadaaqo?
61. gacalka muraayad xidho yaan indhaha lagaa cawryine
62. iska daa, anigaa mid qurux badan kusoo hadyadayne
63. waan kugu taamaa sidaan kuu ilaaliyo iima ilaalisid
64. aboowe macaanoow waa kuu xiisay
65. miyaanan ku qancin?
66. nabsi hayga galin
67. raalibaan kaa ahay
68. raali ahow macaan mise waan is dilaaba?
69. hayga hinaasin
70. nin aan kaa jeclahay aduunka maba joogo
71. Illaahay igama kaa qaado
72. alla maxaan ku dhaqaalayn lahaa
73. tollow yaa ii kaa xidhxidha
74. waynu isku macaanahay saw maaha?
75. caruur qurux badan baan kuu dhali lahaa
76. libaax baad tahay
77. ninku dhali karaa, ku dhiqi kara.
78. macaanoow anigu raaliyo ayaan ahay
79. adiga waan ku ogolahay
80. macaan waan kuu fiicanahay
81. waa laysku kaa halayn karaa
82. hada waan ku aaminay
83. hay lugoyn
84. imika maxaa ka run ah
85. horta ma ogtahay khayrkaa codsiyadoodii aan ka nasan waayay
86. adna markaasaad isu kay xariifinaysaa
87. war la’aan baaba ku haysa
88. hoy intaan kuu soo jeedo wax ila qabo
89. hadaan qof sanifo layma soo mariyo
90. qalbi qaboojoow
91. naftaa aragtidaada ku dagta
92. alla ani maa ku nool jacaylkaaga
93. miyaad fakartay saw kuwan timihii kugu baxeen?
94. labiskaagaa nin kugu gaadhayaa maba jiro
95. qosolkaagaan la dhacaa
96. yaan layga kaa cawryin
97. walal reer dhan baa igu indho kuusha
98. adna waad I dhayal sanaysaa
99. sayloon baad igu xidhay xalay
100.waan kusoo hiloobay